Soosaarayaasha Tababarka & Dabeecadda - Shirkadaha Tababarka & Dabeecadda Shiinaha & Warshad
Afka eyga Nylon Dabool Maaskada Tababarka Afka Eeyaha
Inta lagu guda jiro tababarka eeyga dhaqankiisa iyo dhaqamadiisa saxda ah, suunka ilaaliyaha eeyga ayaa ah mid aad muhiim u ah. Wax dhar tayo sare leh, waara oo xirta u adkaysta, xitaa eeyaha waaweyn ayaa loo isticmaali karaa.
Xakamaynta Eyga Xiinka Ultrasonic Anti Bark Qalabka Joojiye
Nooca cusub eeyga kahortaga eey qalabka elektiroonigga ah, dooro oo isticmaal caag ABS tayo sare leh, waara oo aan biyuhu isticmaali karin Isticmaal ultrasonic si aad u joojiso ciyeyda eyga oo aan dadka u saameyn doonin. Wax ku ool ah kahortagga eeyga xad-dhaafka ah ee xad-dhaafka ah waxayna ku habboon tahay dhammaan noocyada eyga. Badbaadinta eyga iyo dadka.
Afka eyga Dabool Nylon Eeyaha Muuska Kahortaga Xannibaadda
Tilmaamaha Tilmaamaha 1. Isticmaalka sheygan ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara caadooyinka xun sida ciyo, soo qaadista, iyo waxyaabo qaniinyada, laakiin aan ku bixin kharash daryeel eeyo ama farxad. 2.Offering badbaadada ugu badan, raaxada iyo ilaalinta, hawo wanaagsan permeability.Extra weyn double suunka xoojinta, fududahay in la xidho iyo rakibidda, kuma haboona inuu dhaco. 3. Looma baahna in laga walwalo raaxada eeygaaga markii uu xidhayey afkan eyga ah. Waxaa laga sameeyaa dhar jilicsan. Midab sooca: Black Ma ...
Gambaleellada loogu talagalay Dawanka Tababarka eeyaha Dawannada Musqusha ee la hagaajin karo
Astaamaha Sharaxa 1. Dawannadu waa dhawaq wacan, cod dheer oo aad u adag. Dawannada tababarku waa kuwo yar yar oo miisaankoodu fudud yahay, dawannadan ayaa ah kuwo fudud oo fudud oo la qaadi karo inta lagu jiro safarka, socodka, wadada iyo waxqabadyada kale ee dibedda ah. 3.Better Way eeygaaga si uu ula xiriiro. Halkii aad ka maqli laheyd qeyla-dhaan & xoqid, waxaad maqleysaa lebbiska jilicsan ee Dahabiga! Qalabka dawanka tababarka ayaa ah mid aad ugu habboon tababarka dheriga xayawaanka, u isticmaal qalabka isgaarsiinta ama toy weyn, sida bixinta pe ...